कोरोना बिरामीलाई निशुल्क खाना खुवाउछन रवि सिंह - Himali Patrika
कोरोना बिरामीलाई निशुल्क खाना खुवाउछन रवि सिंह
हिमाली पत्रिका २६ बैशाख २०७८, 9:53 pm
काठमाडौं । वीर अस्पतालका नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डा. वीरेन्द्र झाको ६ जनाको परिवारै कोरोना लागेर घरमै आइसोलेसनमा थियो। बाहिरबाट मान्छे बोलाउन नमिल्ने। आफन्त, छरछिमेकी आउने कुरा पनि भएन। खाना बनाउनै असहज अवस्था थियो। त्यही बेला डा. झालाई फोन आयो। रवि सिंहले फोन गरेका रहेछन्।
उनको आफ्नै नामको फेसबुक पेज पनि छ। त्यसमार्फत उनी आफ्ना गतिविधि अपडेट गरिरहन्छन्। सामाजिक सञ्जाल र एक कान दुई कान हुँदै त्यही आधारमा उनीसँग खाना अर्डर गर्नेहरू आइपुग्छन्। उनको घर रहेको ठाउँका जनप्रतिनिधिले खाना सहयोगका लागि फोन गर्छन्। एउटै परिवारमा कैयौं दिन खाना पुर्‍याइरहन्छन् उनी।
उनले काठमाडौं मेडिकल कलेजका २५ जनाका लागि नियमित खाना पुर्‍याएका छन्। दैनिक २ सयदेखी २ सय ५० जना कोभिड सक्रमित, आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिलाई साँझ–बिहान खाना खुवाउँछन्।
उनले भूकम्पका बेला पनि सामाजिक कार्य गरेका थिए। धादिङको चेपाङ बस्तीमा केही घर पुनर्निर्माण गरिदिएका थिए। अघिल्लो लकडाउनमा सयौं मजदुरलाई खाना तथा रासन उपलव्ध गराए। उनले अहिले पनि अत्यावश्यकहरूलाई रासन पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
प्लाज्मा दानका लागि उनले समन्वय गरिदिन्छन््। प्लाज्मा अभावमा आईसीयूमा छट्पटाएका बिरामीका आफन्तले उनलाई फोन गर्छन्। उनले चिनजान, तथा साथी सर्कलमा समन्वय गरिदिने गरेका छन्। यसपटक तीन जना बिरामीलाई प्लाज्मा दान गर्न सकिएकोे उनी सुनाउँछन्। कोरोना संक्रमित भएका साथीहरूलाई प्लाज्मा दान गर्न अनुरोध गर्ने गर्छन्। भन्छन्, ‘कुनै पनि प्रकारको सहयोग चाहिए मलाई खवर गर्नुहोला। सकेको सहयोग सदैव गरिरहनेछु। त्यसका लागि मेरो फेसवुक पेजमा म्यासेज गर्नुभए पनि हुन्छ। या फोनमा सिधै खबर गर्नुभए पनि हुन्छ।’